Friday, 23 February 2018 02:02
Muse Biixi wuxuu naqshado dhowra kala hadhay dowladii Silaanyo ee dalka baabiisay....
1. Silaanyo 7 sano iyo badh kamuu jawaabi jirin dhawaaq yada bulshada ka soo yeedha oo wuu is dhega marin jiray. Marwo Amina Weris na waxa laga hayay Somalidu waa sida soodhaha oo sadex cisho ayuun bay qeyliyaan ee ha iska dhurmaan ee boobka inoo wada..... Muse Biixi isna ilaa iminka kamuu hadal shirkada laga abuuray Dubai ee loo samaystay in dalka lagu dhaco. Tabtii Silaanyo ayuu isna is dhega marinayaa oo tacliintaa wuxuu ka bartay macalin kiisii tegay..... Muse haduu shirkadaa ama albabada u xidhi waayo ama bulshada ka qancin waayo wax dambe ha ka sugina.
2. Muse Biixi wuxuu Silaanyo ka metelaa Wasiiro xumida iyo rakaab xumida. Wuxuu ummada kala xishoon waayay in uu Baashe Morgan indha hooda ka qariyo uu shaan shaan ka tuuro. Wasiir Sacad Cali Shirre na shcibku waxay u arkaan in uu tuugada iyo boobka u sahliyo madaxweyne yaasha sidaa darteed Muse muu ixtiraamin reer Somaliland.
3. Muse Biixi wuxuu kaloo Silaanyo kaga deyday qaraaba kiilka oo ilaa hada cid aan beeshiisa ahayni ma arako xilal badan na wuu u magacaabay. Isku soo xoori.... Isma doorin gaal kaan diray iyo daarta kii galay....
Musow Jiib noom taani filimadan horaa loo wada daawaday e....